Wax Ka Baro Habab Laysugu Qanciyo Ciyaarta Sariirta - Hablaha Media Network
Wax Ka Baro Habab Laysugu Qanciyo Ciyaarta Sariirta
HMN:- Habka 69 ee ciyaarta galmada ayaa ah mid si weyn gabarta u siineysa raaxo ay la qaraxdo ,haweeneyda waxa ay ku seexaneysaa dhabarkeeda halka ninikuna uu kaga imanayo kor.
Markaasi ninku waaa uu taagnaanayaa lugta haweeneyda ee midigtiisa ku adan halka lugteeda ee kaga aadan dhankiisa bidixna ay aahaneyso mid taagan. Intaas ka dib ninku waxa uu gacantiisa bidix ku salaaxaayaa sakaxda.
hoose ee barideeda(labada baryood ama badhyood ) halka gacantiisa midigna uu ku salaaxayo naasaha haddii uu uu doonayo in ay raaxo la qaraxdana waxa haboon in uu ka dhuuqo ibta naaska .
Habkaan waxaa loo yaqaan 69 ee galmada , guska waxa uu ku cayaarayaa gudaheeda , gacantaada bidixna gadaal ayaad kaga salaaxeysa halka afkaadana uu ku dhagan yahay ibta naaskeeda .